संस्कृति - Gorkhapatra | Nepal's First News Organization
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमण : भवन शिलान्यासदेखि सभाहल उद्घाटनसम्म
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथ जात्रा अन्तर्गतको नैक्या लुकेगु जात्रा (नरिवल खसाउने) हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यस्थित येल युनिभर्सिटी आर्ट ग्यालरीले आफ्नो स्थायी सङ्ग्रहमा रहेको नवौँ शताब्दीमा बनेको ढुङ्गाको पार्वतीको मूर्ति नेपाललाई फिर्ता गर्ने भएको छ ।
वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथलाई रथारोहण गरेर जात्रा सुरु भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको एउटा ऐतिहासिक बस्ती हो ललितपुरको लुभू। लुभूमा महालक्ष्मी महाभैरव जात्रा सुरु भएको छ।
दुई वर्षपछि नेपालगञ्जमा ईदुलफितर धुमधामका साथ मनाइयो
नेपालगञ्ज, वैशाख २० गते । कोभिडका कारण गत दुई वर्षदेखि सामान्य रुपमा मनाईंदै आएको मुस्लिम समुदायको ईद पर्व यस पटक निकै धुमधामका साथ नेपालगञ्जमा मनाइएको छ । कोभिडकै कारण यसअघि दुई वर्ष घरमै नमाज पढेका सो समुदायका हजारौं नागरिकले मंगलबार ईदुलफित्रको सामूहिक नमाज विपि चोकस्थित ईदगाहमा पढेका छन् । लामो समयपछि सामूहिक नमाजको आयोजना गरिएकाले धेरै ठूलो संख्यामा जिल्लाभरका मुस्लिमहरु ईद मनाउन भेलामा उपस्थिति भएका थिए । यस पटक धेरै भिडभाड भएकाले ईदगाहको भित्र भन्दा दोब्बर बढी संख्यामा सडकमा नमाज पढेको ईदगाह सञ्चालक समितिका महासचिव ईरफान सिद्दिकीले बताउनुभयो । उहाँले दुई वर्षदेखि यो महान पर्वलाई हर्षोल्लासपूर्वक मनाउन नपाउँदा दुखी बनेकाहरु यस पटक एकैचोटी ईदगाहमा ओइरिएपछि समाल्न समितिलाई हम्मेहम्मे परेको बताउनुभयो । ईस्लामी क्यालेण्डरको रमजान महिना भरी रोजा राखेर सो महिना सकिए लगत्तै विश्वभरिका मुस्लिम समुदायले मनाउँदै आएको ईद पर्वको अवसरमा मङ्गलबार बिहानै नेपालगञ्जस्थित ईदगाह र मस्जिदहरुमा सामूहिक इदको नमाज पढियो ।सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै धार्मिक अगुवाहरुले देशका शान्ति, समृद्धि र विकासको कामना गरेको धर्म गुरु मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरीले बताउनुभयो । उहाँले इद शान्ति र भाइचाराको पर्व भएको जनाउँदै यसले सबैलाई एकताबद्ध बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।सोही अवसरमा पूर्व सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद ईश्तियाक राईले ईदलगायतका चाडपर्वहरुले देशबासीबीच एकता, सदभाव र भाइचारा कायम गर्न सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले हजारौंको बलिदानपछि बनेको नेपालको संविधानले सबै धर्म र सम्प्रदायका हक अधिकारलाई संरक्षण गरेको जनाउँदै सोही मार्फत् राष्टिय एकता बलियो हुँदै गएको बताउनुभयो । ‘दान, त्याग र तपस्याको यस महान पर्वले हामीलाई एकअर्काको सहयोग गर्नुका साथै गरिब र अनाथहरुलाई विशेष माया गर्ने सन्देश दिन्छ’–उहाँले भन्नुभयो । ईदको शुभकामना आदानप्रदान गर्न बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी जनक बस्नेत, नेपालगञ्जका मेयर धवल शमशेर राणा, उपमेयर उमा थापामगर लगायत विभिन्न दलका प्रमुख र स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु ठूलो सङ्ख्यामा ईद पुगेका थिए । ईदको सामूहिक नमाजपछि एक अर्कालाई अङ्कमाल गरेर ईदको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम गरिएको थियो । तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइने सो पर्वमा उक्त समुदायले सेवई, जर्दा, विरयानी, कबाबलगायतका परिकार पकाएर आफन्त तथा इष्टमित्रहरुलाई खुवाउने परम्परा छ । ईदको अवसरमा नेपालगञ्जका विभिन्न टोलटोलमा समुदायका युवाले ईदमिलन कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेका छन् ।
इदउल फित्र मनाइँदै (फोटो फिचर)
आज (मङ्गलबार) इस्लाम धर्मावलम्बी मुस्लिम समुदायले इद (इदउल फित्र) पर्व मनाएका छन् । यी समुदायले एक आपासमा शुभकामना साटासाट गर्दै विहानै देखि पर्व मनाउन शुरु गरेका छन् ।
मङ्गलबार इदकाे सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
नेपाल सरकारले मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले इस्लाम धर्मालम्बीहरुको पर्व ईद (ईद उल फित्र)का दिन मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
मातातीर्थ औँसी हाम्रो ठूलो चाड हो । यो पर्व हरेक वर्ष वैशाख शुक्लपक्षको औँसी तिथिमा मनाइन्छ । यस वर्ष यो पर्व यही वैशाख १७ गते परेको छ । यस दिनलाई मातृ औँसी पनि भनिन्छ । व्यवहारमा भने आमाको मुख हेर्ने दिनको नामले यो पर्व बढी परिचित छ । यस दिन आफ्नो जन्म दिने आमालाई सम्मान गर्ने, माया–ममता दर्शाउने तथा स्मरण गर्ने गरिन्छ । यस पर्वमा आमालाई मीठो खाना र राम्रो नाना दिएर सम्मान गर्ने गरिन्छ । आमा नहुनेहरूले यस दिन काठमाडौँको मातातीर्थ कुण्ड वा नजिकको कुनै पनि कुुण्डमा गएर पिण्डपानी दान गरी आमालाई तृप्त पार्ने प्रयास गर्छन् । कुुण्ड वा तीर्थ जान नभ्याउनेहरू घरमै भए पनि गुरु–पुरोहितलाई बोलाएर गच्छेअनुसार अन्न, वस्त्र तथा फलफूल दान गरी आमाको सम्झना गर्ने गर्छन् । यसो गर्नाले वर्षभरि आमा खुसी भएर आशीर्वाद दिन्छिन् भन्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास छ ।
वैशाख कृष्ण चतुर्दशीको मध्यरातदेखि राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा सुरु हुने कान्तिभैरव जात्राको तयारी पूरा भएको छ । शुक्रबार देखि स्थानीयवासीले आआफ्ना घर आँगनमा सरसफाइ गरेपछि मध्यरातमा कान्तिभैरवको जात्रा सुरु हुने परम्परा छ । जात्राका लागि स्थानीयवासीले बिहानैदेखि घर आँगन, टोल छिमेक सफाइ गरेका छन् ।
वैशाख २१ गतेदेखि रातो मच्छिन्द्ननाथको रथ जात्रा सुरु हुँदैछ। मच्छिन्द्ननाथलाई रथमा भने वैशाखको १७ गते नै राखिन्छ। ललितपुरको पुल्चोकमा रथ जात्राको लागि रथ बनाउने काम भइरहेको छ। नेवारी पात्रोको तिथिअनुसार मच्छिन्द्ननाथको रथ 'पारु' दिनदेखि निर्माण गर्न सुरु गरिन्छ। त्यसको निर्माण १५ दिनमा सक्नुपर्ने परम्परा रहेको निर्माणका सहायक नाइके प्रेम महर्जनले जानकारी दिनुभयो।
मीत लगाउने मौलिक संस्कार
अगनसिंह थापा स्वार्थ र सङ्कीर्णताको सतहभन्दा धेरै माथि उठेको हुन्छ– मितेरी साइनो । सतही र औपचारिक हँुदैन । आदर्श मित्रताको प्रतीक ‘मीत’ शब्द आफैँले पवित्रता, सौहाद्रता र हार्दिकताको विशेषता बोकेको छ । मीत नै हित भन्ने प्रचलित भनाइले नै मीतको खास सांस्कृतिक विम्ब बोकेको छ । नेपाली समाजमा मीतको सम्बन्धले केवल मित्रताको घनिष्टता मात्र प्रतिविम्बित गर्दैन । हाम्रो मौलिक तथा वैभवशाली संस्कृति र परम्पराको पनि पहिचान गराउँछ । मीत साथीहरूमध्ये सर्वाधिक घनिष्ट र निकटको साथी हो । मितेरी साइनो आलग अलग दुई आत्मा जोड्ने एक सुन्दर साँघु हो । जसले माया र विश्वासको मितेरी भावनाबाट निर्मित स्वास्थ सम्बन्धलाई आजीवन आवागमन गराइरहन्छ ।मितेरी साइनोको चोखो मैत्रीपूर्ण गाँठो जीवन रहेसम्म मात्र बाँधिँदैन । मीतको मृत्युुपश्चात सन्ततिहरूलाई समेत पवित्र अनि घनिष्ट हाडनाताको मर्यादामा कसेर राख्छ । मितेरी साइनो हाडनाता रगतको नाताजत्तिकै बलियो र कसिलो हुन्छ । मीतका परिवार आफ्नै परिवारका सदस्यसरह आफूभन्दा ठूलालाई सम्मानस्वरूप ढोगभेट गरिन्छ भने सानालाई माया बाँडिन्छ । तर आफ्नै छोराभन्दा मीत छोराको स्थान र हैसियत माथिल्लो स्तरको हुन्छ । मीतको घरमा पुग्दा विशेष सम्मान पाइन्छ । हजुरकै घर हो जेजति मन लाग्छ आफैँ झिकेर भोगचलन गर्नुस् भनेर सम्पूर्ण अधिकार मीतलाई ससम्मान छोडिन्छ । मीत मात्र होइन, मीतको नाम लिएर अर्को मीत कहाँ पुग्ने जोकोही सम्मानका पात्र बन्छन् । परिस्थितिले बिछोडिन बाध्य सहृदयी मीतहरू पुनर्मिलन हुन उत्साहित हुन्छन् । आपसमा साटिदाको आस्वाद अविस्मरणीय हुन्छन् । एकले अर्कालाई लत्ताकपडा, फलफूललगायत खानेकुरा कोसेलीका रूपमा दिन्छन् । मीतको घनिष्टता कतिसम्म छ भने मीतसँगको झगडा कल्पनासम्म गरिँदैन । मीतको नाम काढेर बोलाइँदैन । बरु मितज्यूू भनेर सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरिन्छ । सँगै सुत्दा भरसक आपसमा खुट्टा पनि ठोक्किनु र छोइनु हँुदैन भन्ने मान्यता छ । मीतको मन दुख्यो भने अशुभ हुन्छ भन्ने अवधारणा छ । नेपालको माटेभोट क्षेत्रमा त मीतको आगमनमा सबैभन्दा ठूलो सम्मान भनेको आफ्नी श्रीमतीलाई सेवामा पठाइदिने संस्कार हो । नेपाली उखान नै छ, सात गोत्र एक मित्र । अर्थात् सात पुस्ताको गोत्रीय नाताभन्दा एक पुस्ताको मितेरी नाता साइनो ठूलो हो भन्ने यसको आशय भएको कुरा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ बताउनुहुन्छ । मीत लगाउने प्रचलन कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति थाहा नभए पनि यजुर्वेदमा मित्रताको भावनाको कुरा उल्लेख गरिएको हुँदा मीतको प्रचलन वैदिक कालदेखि नै भएको ठम्याइ छ गुरुङको । मीत दुई प्रकारका छन् । आपसमा दुवैको हात एकपटक माथि एकपटक तल पर्ने गरी अँगालो मारेर लगाइने बाहाजोरी मीत र टीकाटालो नगरी केवल बोलीको भरमा लगाइने मौखिक मीत । बाहाजोरी मितेरी साइनोमा जुठोपिण्ड लाग्छ भने मुखको मीतमा लाग्दैन तर दुवै प्रकारका मितेरी साइनोमा हाम्रो सभ्यताको संस्कार र संस्कृति सजिएका छन् ।मीत लगाउनका लागि धनीगरीब, शिक्षित अशिक्षित, कालोगोरो, सानोठूलो, जातपातको असमानताको तगारोले रोक्दैन । कहिल्यै छेक्दैन, नजिकटाढाको पर्खालले पनि । जोकोही जहाँकासँग मीत लगाए पनि आखिर मीत नै हुन्छ । विशुद्ध र सहृदयी सम्बन्ध मात्रको साइनोलाई नै आन्दोलित गर्छ । अन्तर्जातीय मीत लगाउनु मीतको अर्को विशेषता हो । यथार्थमा मीत लगाउनु भनेको सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय बढाउनु हो । जहाँ एकले अर्काको सांस्कृतिक त हुँदै हो । यसबाहेक समाज र सामाजिक मनोविज्ञान पनि बुझ्नु पनि हो । अर्को जातिको मौलिक पहिचानको पहिचान लिनु पनि हो । नेपालका प्रत्येक जातजातिले आ–आफ्नै जातीय मौलिकता र विशेषता बोकेका छन् । मीत दुई प्रकारका छन् । आपसमा दुवैको हात एकपटक माथि एकपटक तल पर्ने गरी अँगालो मारेर लगाइने बाहाजोरी मीत र टीकाटालो नगरी केवल बोलीको भरमा लगाइने मौखिक मीत । बाहाजोरी मितेरी साइनोमा जुठोपिण्ड लाग्छ भने मुखको मीतमा लाग्दैन तर दुवै प्रकारका मितेरी साइनोमा हाम्रो सभ्यताको संस्कार र संस्कृति सजिएका छन् ।मीत लगाउने तरिका ठाउँ र परिवेशअनुसार फरक फरक पद्धति पाइएका छन् । समाजका केही मान्छेहरू वा अविभावकको उपस्थितिमा मीत लगाउँदा रहेछन् भने कोही मीतहरू मात्र मिलेर । कोही मठमन्दिरका देवीदेवतालाई साक्षी राखेर पूजाआजा गरेपछि मीत लगाउँदा रहेछन् । कोही घरमै बत्ती बालेर धूप, अक्षता फूलले पूजा गरेपछि आपसमा पैसा तथा ल्याइएका चिनोरूपी रुमाल, घडी, लुगाफाटोलगायतका सरसमान साटफेर गरेर । मीतको लगाउँदाको अन्तिम प्रक्रियामा टाउको एकआपसमा ठोक्काउने प्रचलन पनि छ केही ठाउँहरूमा । कसैले ज्योतिषीले दिएको निर्देशनानुसार मीत लगाउँथे । मीत लगाइयो भने व्यक्तिको अर्थ आर्जन, सन्तान यश वृद्धि, शत्रु नाश, दुर्घटनाबाट जोगिनेजस्ता सकारात्मकतामा विश्वासका साथ तोकिएको जाति वा व्यक्तिसँग परम्परागत विधि विधानानुसार मीत लगाउँथे । पुरानादिनहरूमा प्रायः समान रुचि, परिवेश, हैसियत र उमेरका आपसमा मिल्ने दौँतरीहरू बीच मीत लगाइन्थ्यो । कतिपय ठाउँमा आँखा जुधेकै भरमा मीत लगाइन्थ्यो । कुनै ठाउँमा नाम, अनुहार, जिउडाल, रूपरङ्ग उस्तै वा आंशिक मिलेका बालक तथा तन्नेरीहरूलाई कुनै स्थानीय बासिन्दाले ‘ल आजदेखि तिमीहरू मीत भयौ है’ भनेकै भरमा आपसी सम्बन्ध मौलाएर साँच्चिकै मीतमा रूपान्तरित पनि भइहाल्थ्यो । चाहे तिनीहरू अपरिचित नै किन नहुन् । मनाङको स्याफुङ मेलामा रुमाल, टोपी, गलबन्दीजस्ता लागाइएका लुगा फ्याँक्छन्; जसलाई स्थानीय लामाले एक अर्काको लुगा गाँसिदिन्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानपछि दुवैलाई लामाले खाँदा लगाइदिएर मितेरी साइनो गाँसिन्छ ।जुन तरिका र पद्धतिबाट लगाइएको मीत भए पनि सबै मितेरी सम्बन्ध आजीवन सुमधुर कायम होस् भनी कामना गरिन्थ्यो । मन वचन दुवैले आगामी दिनहरूमा जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सहयोगी बन्दै जाने आपसी प्रतिबद्धता र वाचाबन्धन गरिन्थ्यो । मितेरी साइनो मान्छेमा मात्र सीमित छैन । दुई देशका ठाउँबीचमा पनि विस्तार भएको छ । जापानको टोगा र मुस्ताङको टुकुचे गाउँ र पोखरा कोमागाने, काठमाडौँ मात्चुमोतो सहरबीचको भगिनी सम्बन्ध मितेरी साइनोले नै गाँसिदिएका सम्बन्धका स्वरूप हुन् । यी र यस्ता नेपालका गाउँसहरसँग अन्य मुलुक पनि जोडिएका उदाहरण पाइन्छन् । भगिनी, मैत्री, मितेरी, मित्रताजस्ता निकट सम्बन्धका शब्दहरू मीतबाट नै आएका हुन् ।नेपाली सङ्गीत आकाशका दुई आइकन अथवा नक्षत्र नारायणगोपाल र गोपाल योन्जन हुन् मीतका उल्लेख्य उदाहरण । मितेरी साइनोको सौहाद्रतापूर्ण सम्बन्धपछि अनेकौँ उम्दा, मेलोडियस र सुमधुर कालजयी गीत सङ्गीत जन्मिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जसको उल्लेखबिना नेपाली आधुनिक गीतसङ्गीतको इतिहास अपूरा हुन्छ । जुन गीत सुनेर उनीहरूलाई नदेखेका नयाँ नयाँ पुस्ता पनि आनन्दित हुन्छन् । आज पनि ती सदाबहार गीतहरू कोठा र मनमा गुन्जिरहेकै हुन्छ ।स्वस्थ मीतबीचको घनिष्टता, पवित्रता र आत्मीयता कतिसम्मको उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा द्वापर युगका भगवान् श्रीकृष्ण र सुदामाको आदर्श उदाहरणलाई हेरे पुग्छ । कहाँ द्वारिकाको भव्य राजसिंहासनमा ऐस आराममा जीवन बिताउनुभएको भगवान् श्रीकृष्ण । कहाँ कुटीको तन्नम गरिबीमा लपेटिएर जीवन गुजारेका झुत्रे ब्राह्मण । मितेरी साइनोमा सबै समान हुन्छन् । त्यसैले आकाश जमिनको यस्तो असमानतामा पनि दुवै एकअर्कामा निःस्वार्थ मित्रभावले समर्पित हुन सम्भव भयो । मितेरी साइनोकै आत्मीयताको डोरीले सुखदुःखमा अत्यधिक निकट बनायो ।मीतको महìव र प्राथमिकताको कुरा हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पनि उल्लेख गरिएको छ । श्री स्वस्थानी व्रत कथानुसार, पार्वतीको आज्ञा पाएका अश्वस्थामा ऋषि पातालमा प्रवेश गर्छन् । श्री स्वस्थानी व्रत गराई दुःखीलाई उद्धार गर्ने उद्देश्यका साथ । श्री स्वस्थानी व्रत कथाको १८औँ अध्यायमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ– श्री स्वस्थानी व्रत विधि (पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि महिना दिनसम्म) पूरा गरिसकेपछि पीडित ब्रतालुले सगुनसमेतको प्रसाद पतिलाई दिनु । पति नभए छोरालाई दिनु । छोरा नभए मीत छोरालाई दिनु । मीत छोरा पनि नभए जुन कामना आफूले व्रत बसेको हो सोही कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा बगाइदिनु ।पोखराको गणेश टोलस्थित गणेश मन्दिर पनि मितेरी साइनोको एक उल्लेख्य इतिहास हो । वि.सं. १८४९ मा नेवार जातिका जितारामले गणेश मन्दिर बनाए । मित्रताको साक्षीका रूपमा रहेको मन्दिरको गजुरमा सुनको जलप लगाउने कर्म भने उनैका मनकारी मीत जमदार खागे गुरुङले गरे । जसका लागि कास्की मौजा लामिडाडाका गुरुङले आफ्नी श्रीमतीले कानमा लगाइरहेकी चेप्टे सुनसमेत मासेका थिए । यसले मीतमा हुने मनकारी र सहयोगी भावनाकै स्वभावलाई चरितार्थ गर्छ ।बाइसे चौबीसे राज्य कालमा पनि राजाहरू मीत लगाएको इतिहास छ । कतिपय मितेरी साइनो आफ्नो फाइदामा बढी केन्द्रित किन नहोस् पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका एकीकरण गर्न मितेरी साइनोलाई प्रमुख रणनीतिक हतियार नै बनाएका थिए भन्दा अतियोशक्ति नहोला । भक्तपुरका राजा तथा मीत बुबा रणजीत मल्ल (नरभुपाल शाह र रणजित मल्ल) बीच मितेरी सम्बन्ध थियो । उपत्यकाका मल्ल राजाका हालचाल बुझ्ने हिसाबले । स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले मीत बुबा रणजित मल्लको छोरा वीरनरसिंह मल्लसँग मीत लगाए । उनले कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लसँग पनि मितेरी साइनो गाँसेर परिस्थिति गतिलो बनाए । उनले वि सं. १८२५ मा कान्तिपुरका राजा तथा मितज्यू जयप्रकाश मल्ल र पाटनका राजा रणजित मल्लका राज्य कब्जा गरे भने वि.सं. १८२६ मा भक्तपुरका राजा तथा मीत बुबाको राज्य । मितेरी सम्बन्धकै बलबाट एकीकरण गर्न सजिलो मात्र होइन । सम्भव भएको कुरामा इतिहासकारहरूको एक मत छ ।तीन दशकअगाडिसम्म पनि मेरो जन्म गाउँघर (भिमाद नगरपालिका) किहु, तनहुँतिर मीत लगाउने चलन निकै चल्तीमा थियो । यो फलनाको त्यो ढिस्कानको मीत भनेको सुन्न खुब पाइन्थ्यो । स्थानीयबीच मात्र कहाँ हो र ? मनाङमुस्ताङबाट हिउँदमा जिम्मु, बोझो, फिटकिरी, बिरेनुन, खयरलगायतका हिमाली खजना तथा जडीबुटी बोकेर झर्ने भोटेहरूसमेत मीतका पात्र बन्थे । मीत नलगाएका लागि पनि इष्ट भनेर सम्बोधन गर्थे गाउँबासीहरू ती बक्खु र दोचाधारी भोटेहरूलाई । धेरै पछि थाहा भयो, इष्ट भनेको इच्छा पूरा गरिदिने हितकारी मान्छेलाई भनिदो रहेछ । भिक्षा देऊ भनेर घरढोकामा जोगीले जस्तो माग्न आउनेलाई कोदोको पिठो र डमरु बजाएर चामल दिने प्रचलन थियो । मङ्सिर, पुस लागेपछि जाडो छल्न आउने र फागुन लागेपछि फर्कने गर्थे । स्कुल जाँदा बाटामुनिका बारीमा असरल्लै बसेर दाउराको आगोमा कोदोको ढिँडो ओडाली खाएको दृश्य उत्तिकै रमाइलो लाग्थ्यो । तर अहिले न ती भोटेहरू आउँछन् । न त गाउँघरमा मीत नै लगाउँछन् । लगाउनेहरूलाई चामलमा बियाँ खोजे जसरी खोज्नुपर्ने नाजुक अवस्था छ ।समयको अन्तरालपछि हाम्रा पुर्खाले स्थापित गराइदिएका यो मीत लगाउने मौलिक संस्कार समाजबाट तीव्र गतिमा टाढिएर गएको छ, नेपालभर । कतिपय ठाउँमा त लोप नै भइसक्यो । पहिले मीत लगाउने प्रचलन बढी मौलाएको पहाडी भेगमा समेत अवस्था नाजुक छ अहिले । सामाजिक परिवेशमा आएको परिवर्तन, सहयोगी भावनामा आएको ह्रास, बढ्दो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण जस्ता मीत साइनोको दुरुपयोग जस्ता कारणले गर्दा यसरी टाढिनुरहराउनु भनेको राष्ट्रिय अस्मिताको मेरुदण्ड कमजोर बन्नु हो । अथवा राष्ट्र आफैँ आफ्नो प्रतिष्ठा र सौन्दर्य गुमाउनु हो । समाजका यस्ता मौलिक तथा मर्यादित प्रचलन अनन्तकालसम्म नेपाली माटोको मौलिक उपज बनेर बाँचिरहनुपर्छ ।
५ वैशाख २०७९, सोमबार
टुँडालमा कुँदिएका यौन आसन
विशेषगरी देवीहरुका मन्दिरमा यौन आकृतिका चित्रहरु बढी मात्रामा कुँदिएका हुन्छन् । मन्दिरको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर टुँडालले भरिएको हुन्छ । चारै दिशातिर फरक फरक खालका यौन आकृतिहरु देख्न सकिन्छ ।